Nei uchifanira kudzidza Python. A classic isingambofi yakabuda muchitaera. | Linux Vakapindwa muropa
Iko kupihwa kweakavhurika sosi programming mitauro ingangoita yakawanda seyaMarkdown vaparidzi (uye izvi zvinofanirwa kuziviswa denda neWHO) SKana iwe uri kushamisika kuti ndeipi yekudzidza seyokutandadza kana kukudziridza ako ega maitiro, aya mamiriro anogona kunge achivhiringidza. Nekudaro, mhinduro kumibvunzo yako inongova nemashiripiti maviri; Python.
1 Nei uchifanira kudzidza Python
2 Zvishandiso zvekutanga kuronga muPython
2.1 Debian / Ubuntu uye zvinobva
3 Kusarudza yakabatanidzwa nharaunda yekusimudzira
3.1 PyCharm Nharaunda
Nei uchifanira kudzidza Python
Panogona kunge paine mutauro wechirongwa unoita zvirinani chimwe nechimwe chezvinhu zvinogona kuitwa nePython, asi, haina kumbobvira yafanana. Ne Python iwe unogona kugadzira kunyorera kune ese desktop uye nhare dzinoshanda masystem. Iyo inoshandiswa kuronga mitambo, kuita ongororo yesainzi kana zvirongwa zvekushandisa zvemari. Rakawandisa runyorwa rweakafanogadzirirwa mamodule anoponesa yakawanda yehurongwa hwenguva. Uye, kana iwe Google kana Stack Kufashukira, mumwe munhu anga agadzira iyo app inoita izvo zvaunoda kuita uye iwe unongofanirwa kuteedzera uye kuchinjika.
Kusimbisa kukosha kwemutauro uyu wepurogiramu, zvakakwana kutaura izvozvo Microsoft iri kutora vatambi vakakurumbira, kusanganisira musiki wemitauro Guido Van Rossum iye. Runyerekupe rune izvo kuti Python yaizotsiva VBA semutauro wekunyora mune hofisi hofisi suite
Zvishandiso zvekutanga kuronga muPython
Kana iwe uine yakagadziriswa Linux kugovera, iwe haudi chero chimwe chinhu kuronga muPython. Ehezve kuve nenzvimbo inosanganisirwa yekusimudzira ine Python rutsigiro ichakubatsira iwe zvakanyanya, asi iwe unogona kuwana pamwe neiyo terminal uye neyemavara edhita.
Kuti utarise iyo yakaiswa vhezheni yePython vhura iyo terminal uye nyora:
Unogona kutarisa kuti ndeipi yazvino vhezheni inowanikwa mu kurodha peji yepurojekiti.
Sezvazvinowanzoitika nekugara uchigadziridzwa kugoverwa kweLinux, vhezheni yazvino haiwanzo kuwanikwa Muzhinji, misiyano iri mukati mebazi rimwe chete haiwanzo kupa chikonzero chekuisa manyore. Asi, kana iwe uchida kuve unowedzeredza, unogona kuzviita nenzira inotevera.
Iyo webhu inoona otomatiki iyo inoshanda sisitimu uye inokuratidza iyo vhezheni inoenderana. Gadzira chinyorwa cheiyo vhezheni nhamba nekuti uchafanirwa kudzitsiva neXs mumirairo mune ino dzidziso.
Debian / Ubuntu uye zvinobva
Isu tinoisa zvinodiwa zvinoenderana
Isu tinoenda kudhairekitori uko kwatino chengetedza iyo yekuisa yePython
Unzip iyo folda.
Isu tinoenda kudhairekitori uko mafaera ekumisikidza asina kuvhurwa
Isu tinotanga script yekumisikidza.
Isu tinotanga maitiro ekubatanidza
Kuisirwa kweakakodzera kutsamira
Unzip iyo folda pane mafaera ari.
Isu tinoshandura kune dhairekitori uko mafaera ekuisa asina kuvhurwa
Isu tinotanga script yekumisikidza
Isu tinotanga maitiro ekuunganidza
Kusarudza yakabatanidzwa nharaunda yekusimudzira
Muzviitiko zvese iwe unogona kuongorora iyo yekuvandudza nemirairo
Iko kupihwa kwenzvimbo dzakabatanidzwa dzekusimudzira dzePython paLinux yakafara uye zviri kwauri kuti uwane iyo inonyanya kukunakira.. Tichatarisa pane yakavhurika kodhi mazano ayo zvakare emahara.
Icho chishandiso chakagadzirwa nePython programmers yePyth programmerson. Iyo inopa maficha senge kodhi autocompletion, kodhi kuongorora kuti uone zvikanganiso uye wozvigadzirisa otomatiki.
Inowanikwa muzvitoro Snap, FlatPak uye kubva webhu kubva kumugadziri.
Kubva kune vanogadzira ivo pachavo, zvinokutendera iwe kuti udzidze uye udzidzise Python zvakabatana. Unogona kuiisa kubva kuchitoro Snap uye kubva ku web.
Microsoft payakafunga kuenda kunovhura sosi uye kunyengedza vanogadzira, yakaburitsa Visual Studio Code. VS Code inzvimbo inosanganisirwa yekusimudzira pamwe nerutsigiro rwemitauro yakawanda yekuronga uye hombe gadzira mapulagi Ini ndataura pamusoro kuti kambani yakanga yashandira vanoverengeka Python vanogadzira, mumwe wavo aive mugadziri wemapulagiji anozivikanwa ePython eVS Code, saka tinogona kutaura kuti Python inotamba imomo.
Zvisinei, manzwiro ekare haapfuuri. Vazhinji vanoramba vasingavimbe neMicrosoft. Kwavari, iyo Codium. Iyi ndiyo kodhi yekodhi kubva kuVS Code asi isina chero yeMicrosoft yekuwedzera. Codium inowirirana chose nemapulagi ese uye ine maficha akafanana neakatanga.
Inowanikwa muchitoro Snap, FlatPak y pawebhusaiti yako
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Nei uchifanira kudzidza Python. A classic isingambofi yakabuda muchitaera.
Ini ndakaronga makore mazhinji apfuura ndichishandisa Visual Basic uye ndine chishuwo chekudzidza Python asi ndichishandisa nzvimbo inoonekwa iyo inondibvumidza kuti ndiite windows uye zvikamu zveaya windows nenzira yakapusa pasina kutambisa nguva kukodha. Ndeipi ingave sarudzo yakakodzera kwazvo pane izvo?
Asi iye anoda kugadzira graphical interfaces kubva kuGUI senge muVisual Studio, pasina kunyora kodhi kugadzira izvo zvinongedzo.